Lifestyle – Page2– OOTDMYANMAR
9 WAYS TO STYLE A WHITE TOP THAT WOULD INSPIRE YOU TO DRESS UP
No Comments on9WAYS TO STYLE A WHITE TOP THAT WOULD INSPIRE YOU TO DRESS UP
အဖြူရောင်အင်္ကျီကို လိုက်ဖက်စွာတွဲဖက်ဝတ်ဆင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၉ မျိုး
White tops? Definitely Yes! In case you are bored wearing pyjamas and house clothes ,we have white top outfits to make you look fresh.
အဖြူရောင်အင်္ကျီတွေ? ဟုတ်ပါတယ်။ အိမ်နေရင်းအဝတ်အစားနဲ့ ညဝတ်အင်္ကျီတွေဝတ်ရတာ ရိုးလာပြီဆိုရင်တော့ လန်ဆန်းတဲ့အသွင်အပြင်ကိုရရှိမယ့် အဖြူရောင် outfit တွေရှိပါတယ်။
Obviously white outfits has no season. If you’re planning to upgrade your look this lockdown here’sarundown of our combos to try:
အဖြူရောင်အင်္ကျီတွေက ဘယ်ရာသီနဲ့မဆိုလိုက်ဖက်တယ်ဆိုတာ ငြင်းစရာမရှိမပါဘူး။ ဒီ lockdown ကာလမှာ ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုပုံစံကို တဆင့်မြှင့်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ OOTD က အပေါ်အောက်အတွဲအစပ်ဝတ်စုံလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
#1Ruffles Pair you spaghetti top witharuffle skirt.
ကြိုးတစ်ချောင်းအင်္ကျီနဲ့ အထပ်စကတ်လေးကို တွဲစပ်ဝတ်ဆင်ပါ။
Photo Credits via @mdsmyanmar
#2Denims Puffy white top? Yes! Withadenim skirt? Definitely Yes!
လက်ဖောင်းအင်္ကျီနဲ့ ဂျင်းစကပ်အတွဲအစပ်လေးက လုံးဝထိမိနေမှာပါ။
#3Tattered Play with your classy top withatattered skirt for an edgy vibe.
ရိုးရှင်းပြီးအထက်ထန်းကျတဲ့အင်္ကျီနဲ့ အစွယ်အမွှားလေးတွေပါတဲ့စကပ်ကိုတွဲဖက်ရင်း မတူညီပေမယ့် လိုက်ဖက်တဲ့အသွင်အပြင်ကိုရရှိစေမှာပါ။
#4 Pastel Add color to your white top by fusing inapastel mini skirt.
#5 Belted Off the shoulders andabelted denim skirt FTW.
ပခုံးကျအင်္ကျီလေးကိုတော့ ခါးပါတ်ပါတဲ့ ဂျင်းစကပ်လေးတွေနဲ့ တွဲစပ်နိုင်ပါတယ်။
#6 Florals Show your fun side withatimeless floral skirt .
ပျော်ရွှင်တက်ကြွတဲ့အသွင်အပြင်ကိုပြသနိုင်ဖို့ ဘယ်တော့မှရိုးမသွားတဲ့ ပန်းပွင့်အဆင်စကပ်လေးတွေနဲ့လည်း တွဲစပ်နိုင်ပါသေးတယ်။
#7 Black Skirt to keep the black and white era.
အဖြူနဲ့အနက်ရဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့တွဲစပ်မှုကိုရရှိဖို့ အနက်ရောက်စကပ်နဲ့ဝတ်ဆင်ပါ။
#8 Cool and Girly Fuseatutu andadenim jacket.
စကပ်အကားလေးတွေနဲ့ ဂျင်းဂျက်ကတ်ကို တွဲဖက်မယ်ဆိုရင် လှပပြီး မိန်းကလေးဆန်တဲ့ အသွင်အပြင်ကို ရရှိစေမှာပါ။
#9 Say Floral Tulle A floral tulle skirt please!
Photo Credits via @wutthmoneshweyi
ဟေ့…..အတန်ဆုံး Live Sales လေးရယ် ထိုက်နဲ့ကေရယ် ကိုလွမ်းနေကြပြီလား???
ဒီကာလမှာ အပျင်းပြေ Live ကြည့်ရင်း ဈေးဝယ်ချင်တဲ့ သဲလေးတို့အတွက် mds ဒီဇိုင်း လုံးဝအသစ်ချက်ချွတ်တွေနဲ့အတူပြန်လာပါပြီ!!!
လာမယ့် Sunday (11.10.2020) နေ့လည် ၂နာရီမှာ brand new ဒီဇိုင်းသစ်တွေကို ! 29,000 KS!
Tags Fashion, mdsmyanmar, ootdmyanmar
5 TIPS TO HELP YOUR TINY ROOM LOOK BIG
No Comments on5TIPS TO HELP YOUR TINY ROOM LOOK BIG
အခန်းကျဉ်းလေးကို ကျယ်တယ်လို့ထင်သွားစေမယ့် အချက် ၅ ချက်
As lockdown continues in Myanmar we might feel anxious or bored. Since we are #styaingathome — most of the time we are in our bedroom. And havingaconducive space can help with our anxiety and boredom.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Lockdown ကာလမပြီးဆုံးသေးတဲ့အတွက် စိတ်သောကရောက်ပြီး ပျင်းနေကြမှာပါ။ အားလုံးလည်း #styaingathome ဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ – အချိန်တိုင်းလိုလို အိပ်ခန်းထဲမှာနေကြတာများပါတယ်။ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိတာက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ ပျင်းရိမှုတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။
While havingalimited space doesn’t mean that you can only do less with your bedroom. Never limit your creativity when it comes to decor and upgrades! Remember,atiny space can be as beautiful, homey, and fresh like the big bedrooms we see online —it’s matter of havingavision and planning well.
အိပ်ခန်းထဲမှာ နေရာများများစားစားမရှိတိုင်း ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အခန်းကိုပြင်ဆင်တာ၊ အဆင့်မြှင့်တာတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို ဘယ်တော့မှမကန့်သတ်လိုက်ပါနဲ့။ နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးက အွန်လိုင်းမှာတွေ့နေကျ အိပ်ခန်းအကျယ်ကြီးတွေလို လှပ၊ နွေးထွေးပြီး လန်းဆန်းမှုတွေပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာသတိရပါ။ ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ စနစ်တကျစီစဉ်တတ်ဖို့ပဲအဓိကကျပါတယ်။
Below are tips that can help you create and reinvent your space, one atatime.
ကိုယ့်ရဲ့နေရာကို သက်သောင့်သက်သာရှိအောင် ဘယ်လိုဖန်တီးပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Repaint the wall behind your bed’s headboard.
အိပ်ယာရဲ့အနောက်က headboard ကို ဆေးပြန်သုတ်ပါ။
2. Change your overhead lamp/s.
3. Invest in storage you can easily hide or blend with your décor.
အခန်းထဲမှာအလှဆင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ ရောနှောထားလို့ရတဲ့ ဗီရိုတွေ၊အံဆွဲတွေအသုံးပြုပါ။
5. Buy curtains and bed sheets that match your room’s theme.
အခန်းရဲ့အပြင်အဆင်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ အိပ်ယာခင်းနဲ့ လိုက်ကာတွေသုံးပါ။
Tags Lifestyle, ootdmyanmar
PAING TAKHON SURPRISES PARENTS
No Comments on PAING TAKHON SURPRISES PARENTS
(Get ready to cry)
မိဘတွေကို Surprise လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်
Inarecent Instagram video post, Paing Takhon shares how he surprised his parents by giving themabrand new house and car.
ကားအသစ်တစ်စီး နဲ့ အိမ်တစ်လုံးဝယ်ပေးပြီး မိဘတွေကို surprise လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ပိုင်တံခွန် က သူ့ရဲ့ instagram မှာ video တင်ခဲ့ပါတယ်။
In his post he said
”I’m going to giveanew house andanew car for my Mom and Dad asasurprise gift
My good fortune comes from raising my parents.
My father cried and my mother cried and I was extremely happy, too.”
“ ကျွန်တော့်အဖေနဲ့အမေကို ကားအသစ်တစ်စီး၊ အိမ်အသစ်တစ်လုံး surprise လက်ဆောင်ပေးမှာပါ။ အဖေနဲ့အမေကို ထောက်ပံ့ပေးတာက ကျွန်တော့်ကိုကံကောင်းချင်းတွေယူဆောင်လာပေးပါတယ်။ အဖေ ရော အမေရော ငိုကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အရမ်းပျော်ပါတယ်။” လို့ Instagram မှာ ရေးခဲ့ပါသေးတယ်။
Before you watch this video, make sure to get some tissue:
I’m going to giveanew house andanew car for my Mom and Dad asasurprise gift My good fortune comes from raising my parents. My father cried and my mother cried and I was extremly happy, too.
A post shared by Paing Takhon (@paing_takhon) on Aug 4, 2020 at 7:33am PDT
Video credits to @paing_takhon ‘s IG
ဒီဗီဒီယိုကိုမကြည့်ခင် အနားမှာ တစ်ရှူးအဆင်သင့်ယူထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။
Tags celebrity, Lifestyle, ootdmyanmarcelebrity, paingtakhon